Yangon Pro | Yangon Pro
ကမ်ဘာနာမညျကွီး brand တှရေဲ့ logo ကို တခွားသော ပုံစံတှအေဖွဈ မွငျယောငျကွညျ့ဖူးပါသလား?
2019 ဟာ Bauhaus style နှဈရာပွညျ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ Australian Design Team တဈခုဖွဈတဲ့ 99 Design ကနေ နာမညျကွီး brand တခြို့ကို Bauhaus style နဲ့ ရေးဆှဲကွပါတယျခငျဗြာ။ NETFLIX ရဲ့ LOGO ကိုတော့ N ရဲ့ lowercase ကို သုံးထားပီး လုပျငနျးနာမညျကိုတော့ font အဝိုငျးလေးတှနေဲ့ ရေးသားထားပါတယျ။ Bauhaus ၀ါဒီ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ designer တှဟော “Less is more” ဆိုတဲ့ စကားကို လကျကိုငျထားကွပီး design နဲ့ အရောငျတှကေို အကဈြလဈဆုံးဖွဈအောငျဖနျတီးကွပါတယျ။ Typography နဲ့ ပတျသကျရငျ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို ဂရုမစိုကျပဲ ဒေါငျလိုကျနဲ့ ထောငျ့ဖွတျသုံးတတျ ကွပါတယျ။ cubism ၀ါဒရဲ့ လှမျးမိုးမှုတှကွေောငျ့ ကုဗပုံတှကေို အစီအစဉျမကပြဲ စိတျခံစားမှု အသားပေး ဖနျတီးမှုတှကေို သူတို့ရဲ့ လကျရာတှမှော မွငျတှရေပါတယျ။ apple logo ကိုစကျလုံးပုံစံပနျးသီးမှာ ခှကျဝငျနတေဲ့ ကိုကျရာနဲ့ သရုပျဖျောထားပီးနာမညျကိုလဲ ရိုးရှငျးတဲ့ san-serif font နဲ့ ရေးထားပါတယျ။ BBC […]
သငျ့လုပျငနျးအတှကျ ဘယျလို လိုဂို လိုအပျနလေဲ
လိုဂိုပုံစံ ၇ မြိုး လိုဂို ပုံစံလေးတှကေို သိရတော့ ကိုယျလိုခငျြတာ ဘယျလိုပုံစံဆိုတာ ဒီဇိုငျနာကို အသအေခြာရှငျးပွလို့ရနိုငျပွီး တိကသြခြောတဲ့ပုံစံအတိုငျး ဒီဇိုငျးထှကျလာဖို့ ပိုလှယျကူတာပေါ့နျော။ လှယျကူသှားအောငျလို့ ပုံလေးတှနေဲ့ရှငျးပွပေးထားပါတယျ။ ဖတျကွညျ့ကွပါဦးနျော။ (၁) အထိမျးအမှတျပုံစံလိုဂို (Emblem) ဒီပုံစံကတော့ icon ဒါမှမဟုတျ တိကသြခြောတဲ့ဘောငျရှိတဲ့ သင်ျကတေထဲမှာ စာလုံးဖောငျ့ကို ထညျ့ထားတဲ့ပုံပါ။ သူ့မှာတော့ တံဆိပျတုံး၊ရငျထိုး၊တောငျတှရေဲ့အခြှနျအဖြားတှကေို ယူပွီးဆှဲကွတာမြားပါတယျ။ Emblem ပုံစံကိုတော့ အဖှဲ့အစညျးတှေ၊နိုငျငံတကာအဂေငျြစီတှေ၊ကြောငျး လိုဂိုတှမှော အမြားဆုံးသုံးကွပွီး သူတို့ဟာ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး သပျရပျတဲ့ပုံစံတဈခုကို ဖျောညှနျးတဲ့အခါမှာ အမြားဆုံးနဲ့အလှယျဆုံး သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ (၂) စာလုံးအမှတျတံဆိပျပုံစံလိုဂို (Wordmarks or Logotypes) စာလုံးပုံစံလိုဂိုကတော့ ရိုးရှငျးလှပါတယျ။ CocaCola,Visa လို စာလုံးဖောငျ့ကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံစံမြိုးပါ ။ ဒီလိုဂိုကိုတော့ ထငျရှားပွီး ပွတျသားတဲ့ စာလုံးခညျြးသီးသနျ့အတှကျ သုံးကွတာမြိုးဖွဈပွီး GOOGLE လိုဂိုကတော့ အထငျရှားဆုံး နမူနာပါပဲ။ဖောငျ့ပုံစံကို သနျမာတဲ့စတိုငျလျဖနျတီးပွီး ဖမျးစားနိုငျတဲ့စာလုံးကို ရှေးခယျြထားတဲ့ စာလုံးလိုဂိုတှကေ လှပပွီးကုနျအမှတျတံဆိပျတဈခုအနနေဲ့ ဆှဲဆောငျနိုငျမှာအသအေခြာပါပဲ။ (၃) မိုနိုဂရမျလိုဂို (Monogram Logo) ဒီလိုဂိုကတော့ စာလုံးအစလေးတှကေိုပဲယူပွီး အမှတျတံဆိပျအနနေဲ့ဆှဲပွထားတဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပုံစံတှဟော နာမညျအရှညျကွီးပေးထားတဲ့ လုပျငနျးတှအေတှကျတော့ လှယျကူပွီးရိုးရှငျးတဲ့ […]
စအိုပေါက်နဲ့ တူတဲ့ လိုဂိုကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ Uber
Uber ဆိုရင် ရန်ကုန်က လူတွေ ကားငှားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ International လုပ်ငန်းတစ်ခုမှန်း သိနေကြပြီမလား။ (အခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိတော့ပါဘူး) Ubar ရဲ့ အရင်က လိုဂိုဟာ Designer တွေ ကြားထဲမှာတော့ လူပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လိုဂိုဟာ စအိုပေါက်နဲ့ တူတယ်လို့ “Asshole” သရော်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Uber ဟာ အဲဒီ Brand Mark ကို ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ Logo Type ကိုပဲ အဲဒီ့ အစား အသုံးပြုလာတာတွေ့ရမှာပါ။ Uber ရဲ့ လိုဂို အဟောင်း Uber ဟာ လိုဂို အသစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် Uber ရဲ့ ဖောက်သည်များစွာကနေ Research အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ခဲ့ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ အဖြူ၊ အနက် အရောင်တို့ကိုသာ သုံးကာ အရင်က Sans Serif Font ဟန်ကနေ Serif Font ကို ပြောင်းလဲ သုံးခဲ့ပါတယ်။ Uber ရဲ့ လိုဂို အသစ် […]
“MasterCard နာမည်ကို Logoကနေ ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ Pentagram”
Pentagram ဟာ MasterCard ရဲ့Logoကနေ MasterCard နာမည်စာလုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုLogo မှာ ထပ်နေတဲ့ အနီနဲ့အ၀ါ စက်ဝိုင်း၂ခုသာ ကျန်ခဲ့ပြီး သိမ်မွေ့တဲ့ Brand အမှတ်အသားတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်တွေ့စေချင်လို့သာဖြစ်တယ်လို့ Pentagram ကပြောပြထားပါတယ်။ ယခင်Logo အဟောင်းကိုတော့ Pentagram Design Agency မှ 2016က ရေးဆွဲပေးထားတာဖြစ်ပြီး ယခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Logo အသစ်ကိုလည်း Pentagram က ထပ်မံပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဇန်နဝါရီလက Las Vegas မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Consumer Electronics Show မှာ ကြေငြာခဲ့တာပါ။ 2016ခုနှစ်က Logo ပြောင်းလဲကြောင်း Pentagram မှ ဖော်ပြခဲ့ချိန်မှာတော့ နောက် အနှစ်၂၀ထိ အခုဒီဇိုင်းကိုပဲသုံးသွားပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ပြောင်းလဲချိန်မှာတော့ ထပ်နေတဲ့စက်ဝိုင်း၂ခုကြားက အစင်းကြောင်းတွေနေရာကို လိမ္မော်ရောင်အစိုင်အခဲအဖြစ် လုံးဝပြောင်းလဲလိုက်ပြီး MasterCard စာလုံးကိုတော့ လိုဂိုရဲ့အလယ်မှာမထားတော့ပဲ အောက်နေရာမှာ ရေးဆွဲထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ( ပုံမှာကြည့်နိုင်) စာလုံးဘာမှမပါတော့တဲ့ Logo ကို Facebook မှာကြေငြာခဲ့ချိန်မှာတော့ ‘တကယ်တော့ နာမည်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရတာတော့ ကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်’ လို့ MasterCard မှ […]
ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကို ခံနေရတဲ့ ZARA ရဲ့ Logo အသစ်
စပိန်နိုင်ငံရဲ့ international Brandတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ZARA ဟာ သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့ Logo အသစ်ကို အရင်လကုန် လောက်တုန်းက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ZARA ရဲ့ Logo ဟာ ဒီဇိုင်နာတွေကြားမှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပြီး အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့စာလုံးကြားနေရာလွတ် (Kerning) တွေဟာ မလိုအပ်ပဲနီးကပ်လွန်းနေတယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Logo ကို ဖန်တီးသူတွေကတော့ ပြင်သစ်အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Baron & baron မှ ဖြစ်ပြီး သူတို့အနေနဲ့လည်း တခြားဒီဇိုင်နာတွေကြား အခက်တွေ့နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မူလ Logo ဂျာမန် Typographer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ erik spiekermann က “သူမြင်တွေ့သမျှထဲ အဆိုးဆုံးဖန်တီးမှု” လို့ သူ့ရဲ့Twitter အကောင့်မှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါအပြင် သူက “Logo ကို လူအစားထိုးစက်ရုပ်တွေက ဖန်တီးထားတာဖြစ်မယ်” လို့ ဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ ထို့အပြင် Fabio basil of British design studio ဖြစ်တဲ့ Fortnight Studio မှလည်း တူညီတဲ့စာလုံးပုံစံအတိုင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်အတွက်လိုဂိုတစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ဆွဲပြပြီး လှောင်ပြောင်ထားပါတယ်။ ZARA ဟာ သူရဲ့ယခင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့ စာလုံးရေလေးလုံးပါ Logo […]
A good logo is defined by: Originality Printable on t-shirts, business cards, newsletters, etc. Simple Able to stand on its own Easy to scale Consistent May be changed over time Factors such as uniqueness, adaptability, aspect ratio, scalability, andalogo’s ability to work without color are all things to consider when designingalogo for your company. The Purpose ofaLogo Your logo is often the first impression people will have of your company. Whether it’s […]
How to MakeaDesign Better?
၂၀၁၉ မှာ Design Trend တွေ ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာလိမ့်မလဲ